Blue Muuse Glass Xiinka Udgoon Diffuser - Design fiican & Sameeyo Co., Ltd
Hydrate hawada, ka saar nijaasta iyo in la abuuro jawi is dajiyaan la this Blue Muuse Glass Xiinka Udgoon Diffuser. Its daruuriga saliidaha faafin caraf udgoon u ah walaaq dareenka. Dhig diffuser qolka meditation si aad u dareento dib u soo kacday ugala. Faahfaahinta sida hoos ku: Item no.:ODMF17-092002 Box Size:L17.2 * W17.2 * H22.5cm size saarka Dia: D13.7 * H14.1cm Weight:0.68wax kg:awoodda galaas:120ml awood: 7danab Input W:100-240V,50Hz / 60HZ,0.15danab Output A:24V-0.35Base A: blac ...
Hydrate hawada, ka saar nijaasta iyo in la abuuro jawi is dajiyaan la this Blue Muuse Glass Xiinka Udgoon Diffuser. Its daruuriga saliidaha faafin caraf udgoon u ah walaaq dareenka. Dhig diffuser qolka meditation si aad u dareento dib u soo kacday ugala.
Faahfaahinta sida hoos ku:
size saarka Dia: D13.7 * H14.1cm
Base: saldhig madow iyo silig midabka madow(1.5m) ceeryaamo ahbaa: 20-30ML / 1s
caymiska: 16-20 mitir oo laba jibbaaran
Cool / Heat Qaaca: Cool ;Run Time (joogto ah): 4H ;RuRun Timego'aysa) : 8 saacadood
Function Button: riix 1AAD: ceeryaamo joogto ah, 2nd riix: ceeryaamo go'aysa; 3riix rd: jirsado unit off ;Dhibcood oo Oil :1-2 ;LED: iftiin huruud diiran
1farshaxanka pc qaab galaas(D13.7 * H14.1cm) ,1adabtarada pc, 1pc koobka cabbirka(60ml)D5.2 * H5.0cm, 1A4 pc diiwaanka size.
Dhoobada baabuur Bird Diffuser